नेपाल बन्न नसक्नुका तीन कारण - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
म विद्यार्थीकाल देखि नै जनवर्गिय सँगठन र पार्टिका स्थानीय कमीटीमा नेतृत्वदायी भूमिकाको दोश्रो व्यक्तिका रुपमा नै रहेर लामो समय सम्म काम गरेँ । पछि अनेरास्ववियूको जील्ला सचिव, अँचल कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष हुदै राष्ट्रिय परिषद सम्म र यूवा सँघको जील्ला अध्यक्ष भएर काम गरेँ ।
पश्चिम पहाडको गुल्मी—भनभनेमा बाल्यकाल विताएका डा. रमेश पौडेलको युवा अबस्था तराईको रुपन्देहीमा वित्यो । करिव ४ बर्षको उमेरमै भारतप्रबासमा बुवाको मृत्युपछि वहाँको बाल्यकाल स्वाभावीक संघर्षशिल रह्यो । गुल्मीबाट रुपन्देही हुँदैसमयक्रमले काठमाडौंमा ल्याइ पुर्यायो । कानुन पढेर कालोकोटमा अदालत प्रवेश गर्ने चाहाना थियो तर, पारिवारीक सल्लाहलेअध्ययनलाई ब्यवस्थापनतिर डोर्यायो । नेपालको विकास र अर्थतन्त्र बुझ्ने चाहनाले संसारकै उत्कृष्ट मध्येको विश्वविद्यालय अष्ट्रेलियाको “अष्ट्रेलियन नेष्नल यूनिभर्सीटी” को यात्रा तय भयो । त्यहाँ उनले “विकाशसील राष्ट्रहरुको आर्थिक विकास र व्यापार प्रवद्र्धन” भन्ने शिर्षकमा विद्यावारीधिको सोधपत्र लेखे र भूपरिवेष्ठीत विकाशसील राष्ट्र र अन्य विकाशसील राष्ट्रहरुका विकाश समस्या मा के फरक छन् र नेपाल जस्ता राष्ट्रहरुले छिटो विकाशका लागि के गर्न आवस्यक छ भन्ने कुराको विष्लेषण गरे । अहिले उनी आफ्नो विज्ञता सहितनेपाललाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने अभियानमा सक्रिय छन् ।लामो समयसम्म अध्यापन, अनुसन्धान् र राजनीतिलाई साथै बढाएका पौडेल राजनीतिक पृष्ठभूमिका हिसावले ने क पा एमालेमा आवद्ध छन् । पौडेलसँग नेपाल किन बन्न सकेन र कसरी बनाउन सकिएला भन्ने विषयमा नेपालपाटीले गरेको कुराकानी ।
अहिले तपाई एउटा क्षेत्रको विज्ञ तर राजनीतिक पृष्ठभूमि चै के थियो ?
राजनीतिमा लाग्ने प्रेरणमा बाल्य कालदेखि नै मिल्यो । हजुर बुवा पञ्च्यातको राजनीति गर्नु हुन्थ्यो । काकाहरु त्यति बेला अनेरास्ववियुको पाँचौमा सक्रिय रहनु भएको थियो । उहाँहरुको प्रवाभले राजनीतिमा इच्छा जाग्यो । अंकलहरुको संगतले मलाई पनि अनेरास्ववियुको राजनीतिमा तान्यो । ७ कक्षा पढ्दादेखि म संगठनमा आवद्ध भइसकेको थिए । गुल्मीको पृथ्वी मा.वि. मा पहिलो पटक अनेरास्ववियू पाचौमा सँगठित भएँ । एस एल सी पछि रुपन्देहीको रामणी क्याम्पसमा पढ्न थाले, म पहिलो व्याचको पहिलो विद्यार्थी नै थिएँ । त्यसै बेला बहुदलको आन्दोलनमा रुपन्देहीको मणिग्राम क्षेत्रमा अनेरास्ववियूको क्याम्पसको सचिवको हिसावले सक्रियतापूर्वक लागियो । पछि स्नातक पढ्ने बेला भने संगठनको सल्लाहमा भैरहवा क्याम्पस गएर विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भएँ र पढाईलाई पनि सच्चा र जेहेन्दार विद्यार्थीको हैसियतले नै अगाडि बढाउन शफल भएँ । म विद्यार्थीकाल देखि नै जनवर्गिय सँगठन र पार्टिका स्थानीय कमीटीमा नेतृत्वदायी भूमिकाको दोश्रो व्यक्तिका रुपमा नै रहेर लामो समय सम्म काम गरेँ । पछि अनेरास्ववियूको जील्ला सचिव, अँचल कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष हुदै राष्ट्रिय परिषद सम्म र यूवा सँघको जील्ला अध्यक्ष भएर काम गरेँ । त्यति नै बेला म पार्टिको क्षेत्रीय कमिटीको उपसचिव रहेको थिएँ ।
राजनीति र पढाई सँगै थियो की पढाई रोकेर राजनीतितिर पाइला चाहियो ?
त्यति बेला जो पढाईमा राम्रो छ उसलाई संगठनमा आवद्ध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । म पनि पढाईमा राम्रो विद्यार्थी थिए र पारिवारिक पृष्ठभूमि समाजसेवा थियो । पढाई र विद्यार्थी राजनीति मेरो हिसावले सँगै थियो । घरको पृष्ठभूमि र मेरो ईच्छाका हिसावले चार्टर्ड एकाउण्टटेन्ट पढ्ने सोँच थियो । तर कतिपय राजनीतिक जीम्वेवारीका कारण त्यो सुरु नै गर्न सकिएन । मलाई त्यसमा पछुतो पनि छैन ।
विद्यार्थी राजनीति चै कति उमेरसम्म गरियो ?
भैरहवा क्याम्पसमा पढ्दा पढ्दै म अञ्चल अध्यक्ष भए । राष्ट्रिय पार्षद पनि भए । मेरो विद्यार्थी राजनीति होलटाइमरको रुपमा थिएन । बुवा नहुनुभएकोले परिवार पाल्ने हिसावले केही न केही पेशा पनि गर्नै पर्ने थियो । पहिलो स्नातकोत्तर सकिएको करिव १ वर्ष पछि क्याम्पस पढाउन थालेँ । क्याम्पस पढाउने तर विद्यार्थी राजनीति किन गर्ने भन्ने विषयमा म भित्र नै द्विबिधा पलायो, यद्येपी मैले अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्दै थिएँ । मैले विद्यार्थी राजनीति नगर्ने निस्कर्ष निकाले । पार्टी विभाजनसँगै युवासंघमा पनि समस्या थियो । पछि मैले युवा संघको रुपन्देही जिल्ला कमिटीको सँयोजक र अध्यक्ष भएर काम गरे । त्यस हिसावले मैले पुग नपुग २४ वर्ष पुरा नहुदै विद्यार्थी राजनीति छाडिसकेको थिएँ ।
काठमाडौंप्रवेशले सबै राजनीतिसँगको सम्बन्ध टुट्यो ?
एक हिसावले राजनीतिसँगको सम्बन्ध टुट्यो र अर्को बाटो सुरु भयो भन्न सकिन्छ ।म यूवा सँघको जील्ला अध्यक्षको जीम्वेवारी पुरा गरेपछि काठमाण्डौ आएँ । यूवासँघको केन्द्रीय सम्मेलन हुँदै थियो । म त्यसको व्यवस्थापन समितिमा बसेर काम गरेँ । पछि सम्पर्क मँचमा पनि सामान्य भूमिकामा रहेर साथिहरुलाई सहयोग गरे तर म अलग भूमिकाको खोजीमा लागि सकेको थिएँ । पहिला पनि म विकास र राजनीतिका विषयमा स्थानीय पत्र पत्रिकामा लेखि रहन्थ्ये । काठमाडौमा आएपछि भरतमोहन अधिकारी,डा गोविन्द बहादुर थापा, रमेश सिलवाल आदिसँग सम्पर्क बाक्लो भयो । भरतमोहन अधिकारी र डा. थापा त्यसबेला पनि नेपालको विकाश बारे बहश चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्नु हुन्थ्यो । मैले त्यसको पहल गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागे पछि वहाँहरुका अतिरिक्त विष्णु पौडेल, प्रदिप ज्ञवाली र रमेश सिलवालसँग विभिन्न हिसावले सल्लाह र सहयोग मागे । पछि इश्वरी भूसालको समेत सहयोगमानेपाल टेलीभिजनमा आर्थिक विकाश र सुशासनका विबिध पक्षमा बहश गर्ने गरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र भन्ने कार्यक्रम चलाएँ । यसो गर्दा पनि राजनीतिमा सहयोगी भूमिकामा सँगठित रहिरहेँ र सक्रिय नै थिएँ ।
टेलीभिजनमा कार्यक्रम चलाउँदाका उपलव्धि के भयो?
त्यसबेला सक्रिय बामपन्थी राजनीतिबाट टेलीभिजनमा कार्यक्रम चलाउने सम्भवतः म मात्र थिए । अरु पनि थिए होलान् तर साँगठनिक हिसावबाट चिनिएका थिएनन् । यस हिसावले ममा आफ्नै खालका चुनौति र अवशरहरु थिए । त्यसभन्दा अगाडि विकाश र सुशासनका बारे खासै चर्चा हुदैनथे, यद्यपि आर्थिक समाचार भन्ने चलन भने बसीसकेको थियो । आर्थिक विषयमा मात्र केन्द्रीत भएर चलेको त्यो नै पहिलो कार्यक्रम थियो । अर्को उपलव्धि भनेको बहसका कार्यक्रममा सिमित नेताहरुको मात्र पहुँच हुन्थ्यो त्यो वेला । त्यति बेलासम्म नेपाल टेलीभीजन मात्र थियो, अन्य टेलीभिजनहरु आईसकेका थिएनन् । त्यस कार्यक्रम मार्फत हामीले विकाश र सुशासनका लागि भूमिका खेल्ने सरकारी कर्मचारीहरु, सम्वन्धित नेताहरु, बिज्ञहरु, प्राविधिकहरुलाई समेत टेलीभिजनको पर्दामा उहाँहरुका विचार र भूमिका सहित उतार्न सफल भयौँ । त्यही कार्यक्रमले मलाई अर्थशास्त्रमा थप अध्ययन गर्नका लागि प्रेरित पनि गर्यो । त्यसपछिको मेरो यात्रा अर्थशास्त्र र विकासको अध्यनतिर मोडियो ।
अष्ट्रेलियाको यात्रा कसरी तय भयो ?
टेलिभिज कार्यक्रम चलाउँदा चलाउँदै विकास के हो ? विकास कसरी हुन्छ ? त्यसका मुद्दाहरु के के हुन भन्ने कुरा मनमा खेल्न थाल्यो । त्यसमा थप अध्यन गर्ने रुची पलायो । त्यसमा डा गोविन्द बहादुर थापा, प्रा डा पार्थिवेश्वर तिमील्सीना र प्रा डा विश्वम्भर प्याकुरेलको सल्लाहले पनि भूमिका खेल्यो । भरतमोहन अधिकारीले पनि तपाई जस्तो मान्छे पढ्न जानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । राजनीतिक पार्टीहरुको औद्योगीक नीति विषयमा मैले अर्थशास्त्रमा थेसिस गर्न खोजेको थिए । तर विभागले विवादमा परिन्छ भन्दै मलाई सुपरभाइजर दिन मानेन । मैले बल्खुमा पुगेर म यो विषयमा थेसिस गर्न चाहान्छु हाम्रो पार्टीसँग सम्पर्कमा रहेका प्राध्यापक को छ भन्ने सोधी खोजी गर्दा प्रदीप ज्ञवालीले प्रा डा पार्थिब्यस्वर तिमिल्सेनाको नाम लिनुभयो । मैले उहाँको मातहतमा रहेर नै थेसिस सके । त्यसबेला पार्टिहरुले औद्योगिक नीतिका विषयमा खासै रुची नदेखाएको नै देखियो । बरु तुलनात्मक रुपले अलिकति व्यवस्थित एमाले रहेको पाइयो । माओवादी त्यति बेला शसस्त्र संघर्षमा नै थियो ।त्यसपछि त्यसमा थप अध्यन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अष्ट्रेलिया पुगेको हुँ ।
विद्यावारीधि गरिसकेपछि नेपालको औद्योगिक नीतिलाई फर्केर हेर्दा कस्तो पाउनु भयो ?
त्यही रुपमा मैले अध्यन गरेको छैन । तर सामान्य रुपमा हेर्दा पहिला र अहिले खासै अन्तर पाएको छैन । उद्योग नीति र कार्यक्रमका बिचमा अन्तर छ । नीतिका विषयमा केही सामान्य उल्लेख छ ।लोकतन्त्रमा पार्टीहरु नै सर्वोपरि हुन्छन्, तर उनीहरु नै यस सवालमा उनिहरु परिस्कृत नभए पछि देशका नीतिहरु स्वतः व्यवहारिक बन्दैनन्, हुँदैनन् । पार्टीहरुका घोषणापत्र हेर्दा पनि सामान्य रुपमा समेटिएको छ । तर यो–यो गर्नुपर्छ । यसरी अगाडी बढ्दा यो उपलब्धि हाँसिल हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट पाइन्न । जे जती उल्लेख छन्ती पनि अनुसन्धानमा आधारित भन्दा बढी भावना र आकाक्षामा आधारित छन् ।
त्यसमा राजनीतिक दलहरुको ध्यान पुग्न सकेको छैन भनने मलाई लाग्छ । त्यो नीतिले देशलाई नै कायापलट गर्न सक्छ भन्नेमा दलहरुले अझै नबुझेका हुन की ? विकासका मुद्दाहरु नै अझै पनि व्यवस्थित ढंगले अगाडी बढ्न सकेका छैनन् । विकासको एउटा आधारऔद्योगीक नीतिमा ध्यान कम गए पछि रोजगारी र पूर्वाधारका कुराहरु पनि गफ मात्र बन्ने नै भए । । अर्को दुर्भाग्य भनेको त नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले आफ्ना दस्तावेजहरुलाई तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित भएर बनाउने अभ्यास नै सुरु गरेका छैनन्, त्यसको महत्व नै बुइmेको आभास हुँदैन ।
राजनीति र विज्ञतालाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
राजनीति र विषयमा विज्ञता दुवैलाई साथै बढाउन सकियो भने मात्र नीति निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ । कुनै विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर नै विज्ञता आउने हो । एउटा विषयको विज्ञले अर्को विषय नजानेको पनि हुन सक्दछ, तर विषय वस्तुलाई कसरी समातेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने क्षमता विज्ञसँग हुन्छ । राजनीतिले विज्ञतालाई राम्रो सँग परिचालन गर्दा मात्र देशको आवश्यकता बुझेको र ठिक कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । सारमा भन्नु पर्दा राजनीतिज्ञले धेरै कुराहरु केही न केही बुझेको हुन्छ, विज्ञले कुनै एक बिषयमा गहिरो सँग बुझेको हुन्छ र कुनै पनि विषमा गहिरो अध्ययन गर्ने तरिका सिकेको हुन्छ । हामीकहाँ मात्र होईन अन्य अविकशित मुलुकमा पनि नेताले सवै थोक जानेको अभिनय गर्दछन् । उनीहरुले सवै कुरा जाने जस्तो, विज्ञले केही नजाने जस्तो हुन्छ । यसले गर्दा नजानिदो पाराले विज्ञहरुको अपमान समेत हुन्छ । हुनु के पर्ने हो भने राजनीतिज्ञले आवश्यक विषयमा विज्ञसँग परामर्श गरेर त्यस विषयमा विचार बनाउनु पर्ने हो, नेपालमा त्यो अझै राम्रो सँग सुरु नै हुन सकेको छैन ।
राजनीतिमा जो पदमा पुग्यो त्यो ठूलो हुने तर जसले पदमा पुरयाउन भूमिका खेल्यो त्यो चै सानो हुने जर्वजस्त प्रवृति छ । जिम्मेवारी दिने बेलामा अघिल्लो पटक कुन पोष्टमा काम गरेको थियो भन्ने मात्र हेरिन्छ, जवाक कहाँ कस्तो काम गर्यो भनेरत्यसको हिसाव किताव खोज्नुपर्ने हो। उसको विज्ञता कम हेरिन्छ । त्यसकारण विज्ञहरुले राजनीतिमा पर्याप्त ठाउँ नपाएका हुन्। फेरी केही विज्ञहरुलाई विगतमा दिइएका जीम्वेवारीहरु पनि पुरा नभएका तीतो यथार्थ हामी सँग छन् । विज्ञता र राजनीति सँगै लैजान सक्दा मात्र पार्टी, देश र जनताको समग्र भलाई गर्न सकिने नीति र योजना बन्न सक्दछन्, त्यो नै अहिलेको राजनीतिको मुल कमजोरी हो ।
अभ्यास सुरु भएन किन ? नेतृत्व भएन ? विज्ञहरुको कुरा सुनिएन वा दलहरुले त्यसलाई मुद्दा नै बनाएनन ?
यसमा तीनवटा कुरा महत्वपूर्ण छन् । अहिलेका राजनीतिक दलहरुको अधिकांस नेतृत्व विद्रोहको मानसिकताबाट आएको हो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै । उनीहरु सबै राजनीतिक परिवर्तनका कुराहरुलाई अगाडी बढाउदैै यहाँसम्म आइ पुगे । तर, त्यो परिवर्तन राजनीतिक अधिकारसँग मात्रै जोडियो आर्थिक परिवर्तनसँग जोडिएन । अथवो आर्थिक समृद्धीको क्षेत्र एजेण्डा बन्न, बनाउन सकिएन । राजनीति परिवर्तनका लागि आन्दोलन र चेतना महत्वपूर्ण हुन्छ भने आर्थिक परिवर्तन (विकाश, समृद्धी) रचनात्मकता, नीति, योजना र उत्प्रेरणा सँग सम्वन्धित हुन्छ । नेतृत्वले यो कुरा नबुझेको त होईन होला तर त्यसलाई ब्यबहारमा उतार्न सकिएन, त्यो चुनौती हो । हरेकदलभित्र जो जुन क्षेत्रको विज्ञ छ त्यसलाई अगाडी सारेर विज्ञहरुको सल्लाहमा नै दलहरु नीतिगत रुपमा अगाडी बढाउनु अवको अनिवार्य आवश्यकता हो ।
तपाईको विज्ञता चै के हो, कसरी हाँसिल गर्नुभयो ?
म आफूलाई अर्थशास्त्रको विद्यार्थी ठान्दछु । मैले विभिन्न परिवेशमा अर्थशास्त्रीकै हैसियतले काम गरेको छु । लामो समय सम्म अध्यापनमा लागेँ, करिव एक दशक भन्दा बढी समय विकाशवादी अर्थशास्त्रीको हिसावले अनुसन्धानमा लागेको छु र अन्तराष्ट्रिय जर्नलहरुमा आफ्ना अनुसन्धानात्मक कृतिहरु प्रकाशित पनि गरेको छु । दुई वटा पुस्तक पनि प्रकाशित गरेको छु । मैले हासिल गरेको विज्ञता पनि अरुहरुले जसरी नै हो । अर्थात अध्ययन्, अनुसन्धान, अध्यापन र त्यससँग सम्वन्धित काम । मैले नेपालबाट एमविए र एमए गरिसकेपछि अष्ट्रेलीयामा (वोलङ्गन विश्वविद्यालयमा) अर्थशास्त्रमा एमए—रिसर्च (एमफिल) गर्न गए । त्यहाँ मैले श्रीलंकाको वित्तीय उदारीकरणका विषयमा थेसिस लेखे, त्यसबाट ३ वटा लेखहरु प्रकाशित पनि भएका छन् । त्यहिबाट विद्यावारिधि गर्ने विचार थियो तर सुपरभाइजरले नै त पढ्न सक्ने मान्छे रहेछस, त्यसैले अष्ट्रेलियन विश्वविद्यालय (अष्ट्रेलीयन नेष्नल यूनिभर्सिटी) मा पढ्न जानु भनी सल्लाह दिनुभयो । उहाँको सल्लाहमाम त्यहाँ गएँ । विश्वको ख्याती प्राप्त विश्वविद्यालयमा निकै मेहनत गरेरऔषत भन्दा कमै समयमा विद्यावारिधि सकेँ । विद्यावारिधिमामैले नेपालजस्तै अर्थतन्त्र भएका ३४ वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरुको आर्थिक विकाश र निर्यात प्रवद्र्धनका विषयमा सोध पत्र लेखेँ ।
तपाईको विज्ञता नेपालमाकसरी सदुपयोग हुन्छ ?
मैले जुन विषयमा पिएचडी गरे, त्यो नेपालको चिन्ताले वा नेपालको विकासकमा केही योगदान गर्न सकिन्छ की भन्ने उद्देश्यले नै गरेको हुँ । सँगसँगै म २०४२ सालदेखि विद्यार्थी सँगठनमा सँगठित भएदेखि नै निरन्तर सँगठित भएर नै काम गरिरहेको छु, लगातार म पार्टीमा लागि रहेकोछु । मैले विज्ञता हासिल गर्दा पनि आफूले पाएको जीम्वेवारीलाई राम्रो सँग पुरा गरेको छु,, त्यसैले नै मलाई नेपालको बारेमा अध्ययन गर्न विशेष रुची जगायो ।अहिले म मेरो विज्ञता पनि पार्टीले लिने नीति र नेपालको समग्र आर्थिक समृद्धि सँग जोड्न चाहान्छु । पार्टीले लिने नीति अनुसन्धान मुलक बनाउनपर्छ भन्नेमा अहिले मेरो प्रयास जारी रहेको छ र नीरन्तर लागि रहने छु । लोकतान्त्रीक व्यवस्था भएकोले एउटा पार्टीलाई मात्र सुधार्न सकियो भने अन्य पार्टीहरुले पनि सुरु गर्दछन् र देशमै एक खालको प्रवृत्तिको विकाश हुन्छ भन्ने लाग्दछ ।
तपाईसँग भएको विकाशको दृष्टिकोण के हो ?
नेपालजस्ता विकासशील भूपरिवेष्ठीतराष्ट्रहरु ३४ वटा छन् ।आजको विश्वब्यापीकरणले गर्दा जुनदेशसँग जे छ त्यो बेच्न सक्नुपर्दछ, विकाशका लागि ।अर्थात जसले केही वेच्न सक्दैन वा जो सँग विक्रिका लागि केही छैन, ती देशहरु यो जमानामा स्वाभाविक रुपमा पछि पर्दछन् वा पारिन्छन् । यस हिसालवले हामी प्राविधिक रुपमा कमजोर छौ । भएका कुरालाई बाहिर लैजान सकेका छैनौं । हामी उत्पादन गरिरहेका छैनौं । भएको उत्पादनलाई पनि बाहिर लैजाने सयन्त्रहरु कमजोर छन् । हाम्रा सँस्थाहरु ब्लियो होइन कमजोर बन्दै गएका छन् । हामी खुला अर्थनीतिको कुरा गछौं तर त्यो अनुसार नीति बनाइरहेका छैनौ । अहिले देशको समग्रै आर्थिक नीति के हो भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्र नै प्रष्ट छैन । दोस्रो शुसानको मुद्दा पनि मुख्य हो । नेपालको शासन व्यवस्था के हो ? कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि दलहरु स्पष्ट छैनन् ।विश्व वैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता सँस्थाहरुले जे बनाएर दिए त्यसका आधारमा मात्रै चलिरहेको छ । नेपालको माटो, नेपालको आबश्यकता अनुसार नीति बनाउनेमा कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन, केही पहल भने भएका छन् तर मुर्त रुप लिन सकेका छैनन् ।एमालेमा त्यस्तो दृष्टिकोण केही मात्रामा छ । अतः राम्रो अनुसन्धान गरेर आर्थिक नीति बनाई सन्तुलित विकाशको अवधारणामा जान ढिलाई गर्न हुँदैन ।
नीति नभएको हो कि बिकास गर्नेसस्था नभएको हो ?
एक हिसावले त्यो दुइ वटै अवस्था हो । सँस्था पनि कमजोर छन्, नीति पनि छैनन् । भएका सस्थाहरु पनि कमजोर बन्दै गएका छन् । कुनैपनि निकायले समयमा नै काम गर्दैनन् । १५ किलोमिटर बाटो बनाउछौँ तर त्यसमा चाहिने पुल बनाउँदैनौ जसले गर्दा त्यो बाटोबाट जुन फाईदा अर्थतन्त्रका अङ्गले लिनुपर्ने हो त्यो लिन सकेका छैनन् । ठेकेदारले २० हजार खर्च जोगाउन अहिले पनि करौडौको क्षती पुर्याईरहेका छन् । राजधानीमा भेलले बगाएर बालक मर्ने जस्तो लज्जास्पद स्थितीले नै हाम्रो सुसाशन र योजनाको हालत प्रष्ट्यााउछन् । बनेकासडकहरु बर्षदिन पनि टिक्दैन । राजधानीका सडक हेर्दा भनि साध्य छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी सबैतिर लथालिङ्ग छ । शासन गर्ने शैली नभएर यस्तो भएको हो । यो राजनीति, नीति र प्रशासनको जिम्माको काम हो । दलहरु सत्ताको खीचातानीमा र प्रशासन भ्रष्टाचारमा र आफ्नै गुणगान एवँ स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ । शिक्षा स्वास्थ्य पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाइएको छ । नीजिक्षेत्रले सरकारलाई कमजोर बनाउने गरि ठाउँ ठाउँमा सिन्डिकेट सृजना गरेका छन् । अनुगमन गर्ने निकायहरु त इmनै निरीह छन् । जती नीतिहरु बनेका छन्, तीनीहरुले नेपालको समस्यालाई छुनै सकेका छैनन् । यी सवैले नीति र सँस्था दुवै नभएको सँकेत गर्दछन् ।
नेपाल बन्न नसक्नुका मुख्य तीन कारण के के हुन ?
तीनवटा समस्या मध्ये पहिलोसाशन शैलीको गुणस्तर सुधार्नुपर्दछ, यो कम्जोर भएका कारण नै देशमा लगानी भित्रिएको छैन र लगानीले पनि उचीत प्रतिफल दिने वातावरण बन्न सकेको छैन । दोस्रो, हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको उत्पादन प्रणालीलाई सहयोग गर्न सक्ने गरि विकाश गरिएको छैन । त्यसैले युवाहरु विदेसिने क्रम बढेको हो । उच्च शिक्षालाई व्यवसायिक र सीप मुलक बनाउनैपर्छ । तेश्रो, हामीले विदेशमा के वेच्ने ? भन्ने कुराको यकिन गर्न सकेनौँ ।कृषिमा अरु भन्दा के फरक गर्ने ? परिणाममा थोरै भएपनि तरिका नयाँ र उत्पादनमा विशिष्टता कसरी ल्याउने भन्ने सोच्नुपर्छ । हामी जे उपभोग गर्छौ त्यो उत्पादलन गर्दैनौ जे उत्पादन गछौं त्यो उपभोग गर्दैनौ । त्यसको तालमेल नीतिगत रुपमा नै मिलाउनु आबश्यक छ । यी तीनवटा विषयमा हामी अगाडी बढ्न सक्यौ भने मात्र हाम्रा छिमेकमै भएका ठुला बजारबाट फाईदा लिन सक्दछौँ र नेपाल बन्न धेरै समय लाग्दैन । यी सवैका लागि अव दलहरुले अनुसन्धानमा आधारित नीति, बजेट, कार्यक्रम बनाउने कुराको थालनी गर्नै पर्दछ । विवाद पनि मनगणन्ते भावनामा होईन तथ्यमा आधारीत भएरै गर्नु पर्दछ ।